Concha Zardoya. Ememe ncheta ọmụmụ ya. Egwu | Akwụkwọ dị ugbu a
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 14/11/2021 11:00 | Emelitere ka 30/10/2021 21:49 | Ndị edemede, Abụọ
Zardoya shei bụ onye na-ede uri Chile mụrụ na Valparaíso wee biri na Spen na taa ọhụrụ ụbọchị ncheta ọmụmụ ya. Nke a bụ nhọrọ nke poems nke ọrụ ya icheta ma ọ bụ mara ya.
1 Zardoya shei
2.1 Nrọ ikpeazụ
2.2 Mgbe ahụ naanị
2.3 Alabaster ọzara
2.4 Okwu ahụ bụ naanị ala nna m
2.5 Ọ fọrọ nke nta ka ọ gba ọtọ
2.6 Akwụkwọ njirimara
Site na ndị nne na nna Spanish nwere mgbọrọgwụ na Cantabria y Navarre, Shell soro ha gaa España mgbe m dị afọ iri na asaa. Site na Zaragoza ha gara Barcelona wee biri na Madrid, ebe ọ malitere Ihe omuma na akwukwo ozi. Mana nkuzi Sayensị Ọbá akwụkwọ kpọgara ya Valencia. Ọ bụ n'oge a ka ọ banyere n'otu ụlọ ọrụ akpọrọ Omenala ama ama Site na nke o ji hazie ihe omume omenala na ọbá akwụkwọ. Ọ bụkwa mgbe ọrụ uri ya malitere.
Oge n'aga, Zardoya o dekwara mkpirisi akụkọ na script fim, yana nkuzi na ntụgharị asụsụ. Emechara mụọ akwụkwọ Ọdịnihu nke ọgbara ọhụrụ ma nweta akara ugo mmụta doctorate ya na oge Mahadum nke Illinois.
Ụfọdụ n'ime ọrụ ya bụ: Ngalaba na-akwa ákwá, N'okpuru ìhè ma ọ bụ Obi na onyinyo (nke o ji merie Onyinye uri nwanyi. Ọrụ ndị ọzọ bụ Onyinye nke mkpụrụ, Altamorma ọ bụ Manhattan na latitude ndị ọzọ.
Kedu nrọ nke gị?
(Pọplar ọla edo?)
Kedu ihe ị na-arọ, ụra?
(mmiri na-enweghị isi?)
Onye na-aga maka abalị gị?
(Nnụnụ ndị ahụ naanị?)
Ụwa ọ̀ na-anyịgbu gị?
(Ebili mmiri? Ọñụ?)
Ma ọ bụ ị na-ehi ụra na-ehighị ụra,
n'ebe akwa, n'ájá?
Mgbe ahụ naanị
Naanị mgbe nkịtị chọrọ gị
na ị na-ekwu nke ọma,
ya na onye ọ bụla, gị na onwe gị n'ime,
dee ihe o kwuru.
Ngwa ngwa, okwu ndị ahụ, otu otu,
dị ka okooko osisi ma ọ bụ egwu a hụrụ n'anya
na ịgbachi nkịtị agaghị ekwe omume.
Mkparịta ụka ga-abụ ma ọ bụ nkwupụta,
mgbe ahụ naanị,
nke ahụ ga-emejupụta mmụọ na obi ụtọ
ma ọ bụ mgbu na-enweghị aha.
Obi ụtọ ọhụrụ nke ịmara anyị
ụmụ mmadụ e kere eke
nwee ike ịwụsa mmanụ na-acha odo odo
okwu dị mkpa.
n'abalị ụnyaahụ ha bụ nrọ.
Ọ bụ njem pola
adịghị agwụ agwụ…
Nnukwu ihe mgbochi sere n'elu
dị ka ụgbọ mmiri enweghị nzube,
Seagulls, boobies - nnụnụ
ha nọgidere na-eti ha mkpu.
Amaghị m ma m na-aga ije
n'ihi snow ọcha.
Ma, naanị ya, na-amị amị,
Abịara m na etiti:
ọ bụ axis nke ụwa,
ihe omimi oyi kpọnwụrụ
Okwu ahụ bụ naanị ala nna m
Okwu ahụ bụ naanị ala nna m.
Okwu a dị ndụ nke m na-awụfu
acha anụnụ anụnụ na ọbara ọbara, isi awọ, ma ọ bụ oji na ọcha,
ụnyahụ na taa, echi, ọtụtụ afọ.
Ọ bụ naanị achịcha ka m na-eri kwa ụbọchị.
Ana m ata eriri siri ike, irighiri dị nro,
kandụl ọla edo na-esusu egbugbere ọnụ!
M na-awụsa ya n'anya m, n'ihu m.
A na-esi n’ime obi mụọ ịkwa ákwá.
Mkpuruokwu ndị ahụ na-amịpụta mkpụrụ obi niile.
sedimenti nke wedged silences.
Ọ fọrọ nke nta ka ọ gba ọtọ
Na-ele ihe m na-ede
Isi ihe ahụ dị anya
onye na-ele gi anya,
luminous nwa akwụkwọ
na ahụ m gị
site n'ọnụ ụlọ ya gbara ọchịchịrị
ka m nwere ike
taa tugharia uche gi
na chiri anya nro
nke ọhụrụ nwata?
Ọ baghị uru na m nwere obi abụọ:
ị na-amụ m ọnụ ọchị ezuru.
Chọpụta akwụkwọ gị, akwụkwọ!
Onye bụ m, ay, ha na-ekwupụta dị ka cédulas
onye ọka ikpe bịanyere aka na ya, nke onyeisi obodo.
Maka gị ha na-aza ajụjụ
onye jụrụ ajụjụ.
Ha na-aza maka omume gị na nrọ gị.
N'ogige ha na-eche jụụ.
N'akụkụ dị jụụ na ụgbọ oloko.
N'elu tebụl dị jụụ nke na-ejere gị ozi,
ebe ị na-eri achịcha gị ma na-agụkwa.
Ibe ya na-ebipụtabeghị na-ekwu maka gị.
Ha abụghịkwa ụgwọ ọrụ ma ọ bụ onyinye ebere
na site n'ichefu ị hapụrụ mmadụ,
maka onye owu na-ama na-achọ
akwụkwọ edo edo, anaghị ehichapụ
ihe odide, nkwuputa ochie nke ukwuu.
Ọ ga-akara mma ịkpọ ha ọkụ
wee tụpụ ha ntụ
ahapụkwala aha gị.
Kedu ihe ị bụ na amaokwu na ndụ?
Nyefee ha n'aka ifufe, gbasasịa ha?
Ọ nweghị ihe mere dị ka nke a ... gị ihe odide,
iji ink kanye n'ahịrị ụfọdụ,
ha agaghị adịru ma eleghị anya ma ọ bụ na ha ga-abụ ájá
nke voracious woodworms na Time.
A na-ekpofu ma ọ bụ jiri njirimara gị mee ihe n'ụzọ na-ezighị ezi.
Edewo ihe ịrịba ama nke mkpụrụ obi gị
n'amaokwu nke gị ọ bụla ... ibe ọ bụla
mbinye aka gị na-enweghị mgbagha abanyelarị ...
Ndị ikwu n'ọdịnihu taa na-echere
olu ahụ ha anụbeghị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Abụọ » Concha Zardoya. Ememe ncheta ọmụmụ ya. Egwu